Ny Android SDK dia TSY Rindrambaiko Maimaim-poana intsony | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, About us, fandaharana
Nametraka lahatsoratra iray mampiseho ny fandrosoan'ny Android fotsiny aho, andao lazaina hoe pro pro na manohana ny Android, na izany aza ... tsy izany no izy ¬_¬
Raha hampiasa rindrambaiko iray dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fahazoan-dàlana omeny ianao, miaraka amin'ny fepetra sy fampiasa amin'ny fampiasana ... tsara, andao vakiana ny fepetra na fepetra fampiasana ny Android SDK:
3.3 Tsy azonao atao ny mampiasa ny SDK amin'ny tanjona tsy avelan'ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity. Afa-tsy ny haben'ny takin'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo, mety tsy ianao: (to) dika mitovy (afa-tsy amin'ny tanjona backup), manova, Ampifanaraho, Asaina manampy, mandrindra, injeniera mivadika, disassemble, na mamorona sanganasa derivative an'ny SDK na ampahany amin'ny SDK; na (b) mampiditra ny ampahan'ny SDK amin'ny finday na fitaovana finday hafa afa-tsy solosaina manokana, manambatra izay ampahan'ny SDK amin'ny lozisialy hafa, na mizara izay rindrambaiko na fitaovana mampiditra ampahan'ny SDK.
Izay nanazava tamin'ny fomba tsotra dia:
TSY AZO atao ny manao kopian'ny SDK (raha tsy hoe backup anao manokana izy io), tsy azonao atao ny manova na mampifanaraka azy amin'ny zavatra ilainao, tsy azonao zaraina indray, averina injenieranao io, zarao na zarao, ary aza mamorona derivatives (forks I asio) ny SDK na ny ampahany aminy.
Taratasy 3 fotsiny ... - » WTF
Soa ihany fa misy Replicant … Zana-kazo an'ny SDK Android izay natao talohan'ny fisian'ireo fitsipika na fameperana vaovao ireo. (tranokalan'ny ReplicantSDK)
Tsy misy fisalasalana izany, na dia tsy mpamorona Android mihitsy aza aho ... maharary sy manelingelina ahy izany, ... ¬_¬ … Tokony hanaiky ny fanakorontanan'ny Android ve aho ary hampidina ny lohako amin'ireo fanakianana ataon'izy ireo?
Google, ianao no orinasa manerantany # 3 mankahala indrindra ahy….
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny Android SDK dia TSY Rindrambaiko Maimaimpoana intsony
Tena mbola mino ny teny filamatr'i Google "aza ratsy fanahy" ny olona? Rindrambaiko loharano misokatra fotsiny ny Android, tsy nankasitraka velively ny fitsipiky ny filozofia Free Software izany, mahamenatra raha ny marina, ny mesia tokana dia ny FirefoxOS ampiasain'ny rindranasa HTML5, marary loha i Dalvik.
DalvikVM dia mety tsy fipoahana, saingy efa teo amin'ny 3-5 taona teo ho eo izay ary nitondra ny Android tany amin'ny misy azy. Tsy milaza aho hoe tsy manana potika ny HTML5, raha tsy izany dia mbola tazonina ihany raha ampiharina amin'ny prototype tsy dia misy dikany azo ampahibemaso miasa tsara araka ny fieritreretany azy.
Heveriko fa WebGL (OpenGL) dia ho afaka hanome ny hafainganam-pandehan'ny sary toy ny OpenGL madio, ary amin'ny fotoana hivoahan'ny Firefox OS, ny API kely indrindra rehetra dia efa vonona amin'ny fampiasana sy fampiasana Hardware. Izany hoe, fakan-tsary, mikrô, headphone ivelany.
Ho tontolon'ny fahafaha-manao izany, manantena aho fa tsy handiso fanantenana 😛
Mampalahelo ... mbola tsy nanana finday avo lenta aho fa nanana an-tsaina android ary nahita ireo fanao ireo ...
Ratsy loatra, raha tsy ahitsin'izy ireo izany ary miasa tsara ny Tizen dia tsy maintsy miova isika ...
Ataonao toy ny oohh inona ity !!
Ampahatsiahiviko anao fa ity vaovao ity dia nanomboka tamin'ny 20 Novambra lasa teo ary mbola tsy potika izao tontolo izao, na nihena ny anjaran'ny tsena, heveriko fa efa tafakatra mihitsy aza.
Ankoatr'izay, inona no mahatsara ny Tizen? Inona no ao ambadiky ny Samsung? Raha ny fahalalako azy, fako ireo terminal Samsung ary lazaiko fa manana Note, Note II, ary S3 roa ato an-tranoko izy, olona iray no mampiasa azy rehetra, ary miaraka amin'ny olan'ny S3 sy ny maharatsy ny fanavaozan'izy ireo ahy. ampy ny fihainoana.
Miaraka amin'ny HTML5 ve ny fandaharanao? Hmm, izany hoe, avela ho an'ny motera mpanamory tranonkala ihany ny fandikana, sa tsy izany? Ity ho an'ny lalao 3D dia tsy mandeha, tsy lazaina intsony fa ny famaritana farany ny HTML5 dia mbola tsy nivoaka, ary amin'ny android dia azo alamina amin'ny HTML5 ihany koa.
Vao tsy ela akory izay no nananganana azy ity ary satria ireo orinasa izay naka fitaovana avy amin'ny Google SDK ary nahatonga azy ireo dia nanomboka nirongatra, izay sombina kokoa aza raha azo atao ny kinova android, ary ny SDK dia asa iray izay nataon'izy ireo, tsy tiako holazaina izany. Tsy hitako izay maharatsy ny mandrara ny fizarazarana ny fonosana na ny fampiasa tsy ara-dalàna, raha ny marina dia miresaka momba ny SDK fotsiny isika fa tsy android na zavatra hafa toa izany.
Ohatra iray izany ananantsika amin'ny Kindle, izay mampiasa kinova android novaina, izay efa manaparitaka ny kinova bebe kokoa ary mahatonga ny mpandahatra programa tsy maintsy mihevitra fitaovana iray hafa, toy ny hoe tsy ampy.
Manana ohatra iray hafa izahay ao amin'ireo kinova sinoa, toy ny MIUI ary ny sasany manova ny SDK handrindra ny kinalan'izy ireo.
Ny zavatra tsy maintsy tratran'izy ireo amin'ity taona ity dia ny fanafoanana ireo sombintsombiny rehetra mety hitranga, raha toa ny programa misy anao amin'ny Android dia tokony hikajianao karazana terminal 2 na 3 fa tsy zavatra 400 toa izao. Raha tsy azonao izany mandritra ity taona ity dia matahotra mafy aho fa hanomboka hihinana tany ny Ubuntu for Phones, noho ny fomba nampianaran'izy ireo azy dia tsara izany ary amin'ny alàlan'ny fandaharana ao amin'ny C dia hahazo fampisehoana betsaka ianao ankoatr'izay. dia nilaza fa ho mora ny mandefa fampiharana Android mankany Ubuntu
Ahoana ny hevitrao ?. Izany no mitranga rehefa vola no anaovana ny zavatra. Orinasa lehibe i Google ary ny dingana kely indrindra haleha dia mikendry zavatra iray ihany: Mahazoa vola arak'izay azo atao ary mora sy haingana araka izay azo atao, he, he.
Raha tsy diso aho dia nataon'ny orinasa sinoa nivarotra fitaovana tamin'ny fork android izay nanaiky fampiharana fotsiny avy amin'io orinasa io, fa ny olana dia ny orinasa hafa (indrindra ny Asus, raha tsy diso aho) manaova zavatra mitovy. Amin'ny farany dia heveriko fa ireo orinasa izay ao anatin'ny mpiara-miasa amin'i Google ihany no mihatra. Azoko antoka fa nisy zavatra toa izany fa raha diso aho ahitsy: D.
Oo go ... Hihatra amin'ny «Tools Tools» ihany koa ve izy io? Satria ireo fitaovana fanesorana amin'ny alàlan'ny lampihazo ireo dia ampidirin'ny fampiharana sasany hanongotra, hametraka fanarenana sns.
Raha izany dia fako goavambe ho an'ny antoko fahatelo. Ho an'ny mpampiasa mivantana ny SDK dia tsy hisy olana.
Fantatro ny réplantant, na dia tsy nisy hevitra aza fa nanana SDK ry zareo. Saingy, amin'ny fanaovana "fork" an'ny SDK, izay heverina fa tsy afaka intsony, tsy hanitsakitsaka an'io lalàna io ve izy ireo? "Voarara ny maka tahaka / manova ampahany iray na maromaro amin'ny SDK"?
Mbola mikasa ny hanohy hampiasa ny SDK ankehitriny aho. Ny tsy hitovizany dia ny fitaovan'ny fitaovana Devs (sns…) hangataka antsika hametraka ny SDk feno fa tsy hampiditra ampahany kely amin'ny ADB (Android Debugging Bridge, na Android Debugging Bridge).
Isan'andro dia mahita ho avy bebe kokoa amin'ny Firefox OS na Ubuntu Phone OS aho, farafaharatsiny ho ahy 😀
Satria tsy manana antoka isika fa tsy hiafara toy izao ny Ubuntu Phone OS (andao, azo inoana fa), miloka amin'ny Firefox OS aho (izay mitaky loharanom-pahalalana vitsy kokoa koa, afaka mamelona ireo reliky).
raha canonical mampiasa gpl dia heveriko fa tsy mahavita an'io.
Nefa jereo, ELAV, faminaniana toy inona ny teniko !!! Google no Microsoft vaovao!
+1. Afaka miloka amin'ny Ubuntu Phone aho, indrindra amin'ny fampifanarahana amin'ireo rafitra hafa. Ary raha ny fahalalako azy dia hanohy ny politikan'ny gpl mahazatra i Canonical.
Tsapako fa manitatra ny vaovao ianao. Ny SDK Android no resahina fa tsy ny Android. Ary eo dia efa nisy nilaza fa hieritreritra safidy hafa? Inona ny SDK !! Mijanona ho toy izany ihany ny Android. Tsy handoa izany izy ireo, na handoro ny efijeryo rehefa ampiasainao izany, ary tsy hamono ankizy any Afrika koa. Hitsahatra tsy ho afaka fotsiny ny SDK. Manao ahoana ny faharatsiana, ny fahafantarana ny zavatra rehetra atolotry Google an-kalalahana antsika?
Google dia manolotra serivisy maimaimpoana betsaka IHANY SATRIA satria mitondra vola aman-karena an-tapitrisany maro ianao (vakio: fampielezana hevitra, marketing, doka sns) izay tsy misy mino fa Google no Vokovoko Mena, na Greenpeace na zavatra hafa toa izany!
Eny, marina izany, ny SDK Android ihany, tsy misy hafa ... fa ny sasany amintsika dia tsy mahazo aina tanteraka na milamina rehefa voarara tsy hampiasa zavatra amin'ny fomba iray na fomba manokana isika, dia ... ny lazaina: «raiso ity, fa tsy afaka mizara, mampifanaraka na manahafanao azy“… Andao, tsy dia tsara loatra izany, sa tsy izany?
Saingy @Tanrax ny SDK dia ny mahaliana antsika mpamorona, raha tsy misy an'io maimaim-poana io dia tsy hisy intsony ny romana novaina, tsy hisy miui intsony, tsy hisy cyanogen intsony, sns ... tapitra ny fahafinaretana.
Tsy mivoatra amin'ny android aho satria tsy tiako ny API ary ny java dia afaka mametraka blushes betsaka araka izay itiavany azy, izay mbola matevina tokoa. Nanantena ny ho any meego sy qt aho, ñiff, ñiff ... fa ilay madlito zanaky ny lehibe ... elop ny Trojan dia nanimba azy tao amin'ny Nokia, antenaiko fa tsy ho faty aloha loatra i Tizen ho mpandimby, tamin'io fotoana io hoy ny OEM rehetra hampiasa meego izy ireo ary amin'ny farany pum.
Andraso kely. Ahoana no tsy hisian'ny ROM intsony? Ny ROM dia mifototra amin'ny kaody loharano Android, fa tsy ny SDK (raha tsy izy ireo no ROM voalohany voalohany izay ataon'izy ireo ho porofon'ny foto-kevitra, miorina amin'ny sary Android avy amin'ny SDK).
Na izany na tsy izany, ny SDK dia ampiasain'ny Cyanogen sy ny orinasa handravana ny ROM, tsy mila manova azy akory izy ireo. Ohatra fotsiny, ny antoko fahatelo tsy afaka mampiasa malalaka ny SDK amin'ny fitaovany, ohatra, programa handrava takelaka.
Ankoatra izany, manao Tsy maninona izany.
Marina, azafady, paranoia fa mampatahotra ny vaovao.
Etsy andaniny @Kzkg lahatsoratra Qt5 nivoaka izao !!! http://qt-project.org/qt5
Tsy navaozina niaraka tamin'ireo kinova farany aho tato anatin'ny volana vitsivitsy ^ - ^ U
Eny, tsy rindrambaiko maimaimpoana intsony io, ary? Manana ny zony rehetra hanao izay tadiaviny amin'ny rindrambaiko novolavolainy izy ireo, hanana ny antony tsara izy ireo.
Mitandrema ralehilahy, fa raha misy fanehoan-kevitra toy izany dia azonao atao ny mandrara azy tsy hiala eto ... LoL
Nah 😀… tsia, eny, rehefa namoaka ny vaovao aho dia vonona ny hanao filokana ao an-tranoko fa hamela fanehoan-kevitra marobe eto LOL !!
Tsy miditra handinika ny vaovao aho fa misy ny tranonkala mandà fa marina izany. Loharano: http://www.zdnet.com/no-google-is-not-making-the-android-sdk-proprietary-whats-the-fuss-about-7000009406/
Misaotra amin'ilay rohy dia nosokafako izy ary novakiako ny momba azy, na izany aza, mahasarika ny saiko izany ... satria amin'ny resaka fampiasana ny SDK dia napetrak'izy ireo ihany koa ny fepetra na fameperana, navelako tao amin'ilay lahatsoratra ilay rohy.
Na izany na tsy izany, misaotra 🙂
araky ny zdnet: inona ny "propriétaire" dia ny SDK binary, ny loharanom-pahalalana dia manana alalana avy amin'ny Apache 2.0 licence.
Na izany na tsy izany, tsy maintsy mampiasa programa manana ianao hidirana amin'ireo loharano misy ao aminy, tsy maninona izany….
Hivoatra amin'ny telefaona ubuntu avy eo.
Fankahalana mandrakizay ny finday avo lenta maoderina!
Tsy tia Android mihitsy aho satria JAVA manana anarana tsara. Na dia marina aza fa tsara ny vokatra farany, ny zava-misy fa Java io dia mbola tsilo hatrany ambanin'ny tongotra.
Tsy hitako ny fotoana hisehoan'ny Ubuntu Phone (raha marina izany fa ho fork an'ny GNU / Linux madio) na telefaona hafa manome fahafaha-manao mitovy (na lehibe kokoa, tsara kokoa!) Fa ambonin'izany rehetra izany dia tsy Java.
Tsy mahagaga ahy izany, mihoatra ny ... Tsy ho gaga aho raha averin'i Google amin'ny vokatra maro hafa, toy ny Chromium
Ho tsikelikely ho malemy malemy izy ireo rehefa manjaka ny tsena
Mampiasà rindrambaiko maimaimpoana ho fitaovana handresena ny fifaninanana ary avy eo avelanao
Tongasoa eto amin'ny kapitalisma, mampiasa anao izahay, mamadika anao ary manararaotra ny hevitrao rehetra amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlanay izahay
Izany rehetra izany no jerena. Mankato ny teninao aho, Rainbow_fly.
Indraindray aho manontany tena hoe, isika rehetra izay mitsikera an'ity karazan-javatra ity (tafiditra ao amiko) dia tsy hanao toy izany raha toa ka afaka manangana orinasa toa an'i Google ahazoana tombony isika? Izay koa no mitarika ahy amin'ny fanontaniana iray hafa, tsy hanao toy izany koa ve i Canonical raha vantany vao mahatratra ny tsena ny Ubuntu Phone, rehefa avy nanambola tamin'ny Ubuntu? Hmm ... sarotra be ve izany?
Miankina amin'ny fahazoan-dàlana ampiasain'izy ireo izany. Raha mampiasa ny GNU GPL izy ireo dia tsy ho afaka.
Nanontany tena foana aho momba ny karama. Heveriko fa izaho koa ...
mpifindra monina dia hoy izy:
Mmmm tsy haiko. google dia iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany, mila tombony bebe kokoa ve?
Valiny amin'ny mpifindra monina
Fahalalahana amin'ny lozisialy, fantatsika daholo izay ivangongoantsika eto, transcends dia resaka vola. Noho io antony io ihany dia tsy maharesy lahatra ahy ity fampifanarahana ny "raha nanana orinasa aho dia hakatonako ilay kaody."
* mihoatra ny resaka vola.
Heveriko fa marina ny anao, mitsikera anay izahay satria tsy mitovy amin'ny toe-javatra misy anay. Heveriko fa tsy ratsy ny Microsoft, Apple na Google, ny mitranga dia tsy orinasa mpanao asa soa izy ireo, mitady tombony, fotoana. Mpankafy Apple mividy paoma ho an'ny filaminana, na inona na inona vidiny lafo ary mitsikera ny linux amin'ny zavatra rehetra. Ireo an'ny Microsoft noho ny lalao marobe ary satria miaraka amin'i Win8 dia heveriko fa nanao zavatra tsara kokoa izy ireo. Ary google tsara, google dia hanolana anay indray andro any ary tsy ho tsikaritray akory.
Fa mbola mino aho fa ny orinasa dia mahazo vola fa tsy amin'ny zavatra hafa. Iza indraindray no manararaotra ny mpampiasa? Ie. Fa eo io.
Ankoatry ny fihetsiketsehana, efa nametraka sary ve i Canonical na nandefa ny kaody loharano? Fisalasalana izany. Tamin'izany no nahafahantsika nanomboka nametra-panontaniana tamin'ny Ubuntu Phone.
Mikasika ny teboka iray hafa, raha nanangana orinasa iray aho, dia halefako eo ambanin'ny GPL. Ny asako dia voaro amin'ny fahavononany ho tonga privatize ny kaody ary afaka manararaotra ny mpiasa goavambe izay andraisan'ny olona anjara aho. fialam-boly, raha azontsika antsoina izany.
Azonao atao ny manana fifaninanana miaraka amin'ny loka vola ho an'ny olona iray ho avy hanome anao ny endri-javatra tadiavinao eo ambanin'ny GPL ary tsy handoa karama azy ireo.
Jereo, avelao ny tombom-barotra, izay ara-dalàna toy ny amin'ny orinasa hafa; Nisy olona nanontany tena ve hoe ohatrinona ny vidin'ny serivisy rehetra omen'ny Google maimaimpoana? Sa mbola mieritreritra izy ireo fa milatsaka avy any an-danitra ny vola na maniry eny ambonin'ny hazo, azafady ...
Etsy ankilany, ny fanovana ny fahazoan-dàlana dia avy amin'ny SDK, izay tsy ampiasain'ny ankamaroan'ny ankamaroany ary ampahany tsara tsy mahalala hoe inona izany araka ny fanehoan-kevitra maro. Marina fa marina ny fitsikerana an'i Google momba an'io, saingy tsy mila manao tafio-drivotra amin'ny vera rano ianao.
Mahatonga ahy hanakorontana bebe kokoa amin'ny Ubuntu Phone ity.
Te-hanontany an'izay mahalala aho hoe inona no niova tamin'ny fomba fampiasana ny SDK?
Tamin'ny taona 2009, efa nisy ny teboka 3.3: http://web.archive.org/web/20100111025451/http://developer.android.com/intl/ja/sdk/terms.html
3.3 Afa-tsy ny fatra takian'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo, dia tsy azonao atao ny mandika (ankoatry ny tanjona famerenana), manova, mampifanaraka, manaparitaka indray, manaparitaka, manamboatra injeniera, manafoana, na mamorona sanganasa avy amin'ny SDK na ampahany amin'ny SDK. Afa-tsy ny haben'ny takin'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo, dia tsy azonao atao ny mampiditra ny ampahany amin'ny SDK amin'ny finday na fitaovana finday hafa afa-tsy solosaina manokana, manambatra izay ampahan'ny SDK amin'ny rindrambaiko hafa, na mizara rindrambaiko na fitaovana mampiditra ampahany amin'ny SDK.
Hametraka amin'ny fomba hafa ny fanontaniana aho raha misy mamaly ahy. Tsy rindrambaiko maimaimpoana ve ny Android SDK amin'ny taona 2009?
Mampalahelo fa ny fanidiana ny Android nefa, antenaina fa ho feno fankasitrahana tokoa ireo orinasan-tserasera lehibe!
Andao hojerentsika hoe ahoana no ataon'ny Samsung amin'ny Tizen na Firefox OS.
Ary inona marina ny SDK ary inona no fiantraikany amiko amin'ny maha-tompona terminal Android anao?
Da3mon dia hoy izy:
SDK dia mijoro ho an'ny Kit fampandrosoana ny lozisialy, fitaovana hananganana rindranasa amin'ny ankapobeny dia tsy misy fiantraikany aminao velively amin'ny maha mpampiasa anao raha toa ka developer ianao satria, satria tsy rindrambaiko maimaimpoana intsony izy io, dia misy ferana sasany azonao atao na tsy azonao atao.
Mamaly an'i Da3mon
ivonne dia hoy izy:
Mamaly an'i ivonne
chinazo mahery vaika dia hoy izy:
Tsy miraharaha koa aho, manana ny spforkIO aho. Alohan'ity mandat ity.
Mamaly an'i chinazo mahery vaika
Nina Paley sy ilay lozisialy very Vector Animation Free